उबुन्टु सफ्टवेयर सेन्टर को पेपैल को समर्थन छ लिनक्सबाट
म यो को लागी प्रयोगकर्ताहरु को लागी एक शुभ समाचार हो Ubuntu, यसैले मैले यो तपाईसँग बाडें। अब सशुल्क अनुप्रयोगहरू खरीद गर्न सजिलो हुनेछ Ubuntu सफ्टवेयर केन्द्र यो तथ्यलाई धन्यवाद छ कि धेरै चाँडै, यसको लागि समर्थन हुनेछ PayPal.
यो घोषणा गरिएको छ क्यानोनिकल ब्लग, जहाँ स्टुअर्ट metcalfe भन्छन् कि यो नवीनता अर्को केहि भन्दा पहिले उपलब्ध हुन सक्छ क्रिसमस। मलाई लाग्छ कुनै श without्का बिना यो एउटा उत्तम चरण हो र ती एप्लिकेसनहरू खरीद गर्न धेरै छिटो तरीका हो जुन हामी चाहन्छौं सफ्टवेयर केन्द्र। आजको संसारमा, यी ती चीजहरू हुन् जसले हाम्रो लागि जीवनलाई अलि सजिलो बनाउँदछन्।
खबर मेरो हातबाट आउँदछ novatillasku.
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » उबुन्टु सफ्टवेयर सेन्टर को पेपैल को लागी समर्थन छ
सफ्टवेयर सेन्टर उबुन्टुको सर्वश्रेष्ठ हो (यद्यपि यो अझै अलि भारी भएको र मलाई सुस्त देखिन्छ), व्यक्तिगत रूपमा म यसलाई थोरै प्रयोग गर्दछु, किनकि म सधैं उही अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्दछु, तर जब म लिनक्समा गएँ भने यसले मलाई एक भन्दा बढी समस्याबाट मुक्त गर्यो। अब यदि उनीहरूले पेपैलको लागि समर्थन समावेश गर्दछ भने, यो Appstore को रूपमा उत्कृष्ट चरण हो। अर्कोतर्फ, लिनक्समा जस्तै उत्कृष्ट नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू छन्, त्यहाँ अन्य धेरै राम्रो भुक्तानी अनुप्रयोगहरू, र धेरै राम्रो खेलहरू (अम्नेसिया, वेणी, आदि) पनि छन्। यी प्लेटफर्महरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनु भनेको कुनै श doubt्का बिना, प्रयोगकर्ताहरूका लागि एकदम राम्रो समाचार हो। यी विकासकर्ताहरू।
यो निस्सन्देह केहि सकारात्मक कुरा हो, यो याद राख्नुहोस् कि अवसर नै सबै थोक हो, जुन प्रयोगकर्तालाई कुनै पनि प्रकारको एप्लिकेसन प्राप्त गर्ने अवसर / विकल्प दिँदै, भुक्तानी गरिएको होस् वा नहोस्, प्रयोगकर्ता नै एक छनौट गर्नुपर्दछ 😀
खैर, यो मलाई नराम्रो लाग्छ। प्याकेजहरूको स्थापना प्रबन्धन सफ्टवेयर केन्द्रले मलाई सिनाप्टिकको तुलनामा (ढिलो र अक्षमको लागि) नराम्रो लाग्यो। स्वामित्व सफ्टवेयरको लागि अब पेपैलको बारेमा। मलाई तपाईको बारेमा थाहा छैन, तर म स्वामित्व सफ्टवेयरको प्रयोगबाट बच्न अन्य चीजहरूमा लिनक्समा छु। मलाई यो मनपर्दैन, तर म बुझ्छु कि ट्याब्लेटहरू र अन्यमा भविष्यको लागि यो एक थप चरण हो ... जहिले पनि, एप्पलको स्टोरको साथ अनुसरण गर्दा। यो स्वीकृति हुनेछ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन।
उबुन्टु ड्यासका लागि केहि लेन्सहरू